Kooxda Daacish oo dhaq dhaqaaqyo ka bilbaabey deegaano ka tirsan Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kooxda Daacish-ta Soomaaliya ayaa waxaa ay haatan dhaq dhaqaaqyo ciidan ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobolka ari Puntland gaar ahaan duleedka Magaalada Qandala.
Ilo-wareedyo ku sugan degmada Qandala ayaa waxaa ay sheegeen in rag hubeysan oo ka tirsan kooxda Daacish lagu arkay Saacadihii la soo dhaafay dhulka buuraleyda ah ee duleedka Qandala,isla markaana dadka deegaanka ay casbi soo wajahday.
Dhaqdhaqaaqa ay Daacish bilowday ayaa ku soo beegmaya, xilli wefdi ka tirsan Puntland uu ku sugan yihiin degmada Qandala, islamarkaana ay halkaasi ka daah-fureen mashruuc Layrarka Cadceeda ku shaqeeya oo ay hirgelisay hay’adda TIS+/USAID.
Kooxda Daacish ayaa Magaalada Qandala ee Gobolka Bari waxaa ay la wareegta 26-kii October 2016,hayeeshee Ciidamo ka tirsan kuwa Puntland oo weerar ku qaadey ayaa la wareegay degmadaasi Qandala 7-dii December 2016.
Si kastaba Kooxda Daacish-ta Soomaaliya ayaa awoodooda ugu weyn waxaa ay ku leedahay deegaannada Puntland,iyada oo mararka qaar ay dilal ka fuliyaan.